Moments Neshamwari 10
Zvinyorwa zvinobatwa mumakoramu aya akadai seazvinofarira uye zvinokurudzirwa nevaverengi veZWI. VANHAMA NESHAMWARI, isu tinoshuva kuramba zvese zvinotsanangurwa netaurwa. Iwo haana kurongerwa munzira ipi neipi kuti ave negakava. Mibvunzo inotsanangurwa neshamwari dzinoedzwa kupindurwa nemumwe wavo uye nenzira yeshamwari. Kukakavara, nekuda kwekupokana, hakuwanzo kukonzera kushamwaridzana.
Chinyorwa chinotevera, chakagamuchirwa nguva pfupi yapfuura kubva mukuburitswa kwaKwayedza, chingasaita senge muverengi kunyatsoita semibvunzo nemhinduro dzepasi paMAMESI NEVEMHARAI, asi nekuda kwekufarira kwezvinhu zvakurukurwa uye nechikumbiro chemunyori Kuita kuti zvinopesana zvake zvinyorwe mu SHOKO, REMWEDU rinopindura pazvinopokana sekukumbirwa, zvichinzwisiswa kuti zvinopesana nemisimboti nezviito zvesaenzi chechiKristu, uye kwete kuzvimiro-Ed. SHOKO
New York, Kurume 29, 1907.
Kuna Iye Mupepeti we SHOKO.
Sir: Mumagazini yaMarch ye SHOKO, "Shamwari" inobvunza uye inopindura mibvunzo yakati wandei nezveChristian Science. Mhinduro idzi dzinoratidza kuti munyori akatora dzimwe nzvimbo dzisina kufanira paChristian Science, iyo, kana ikazadzikiswa pamhedzisiro yavo ine musoro, haina kukodzera kuita kwemasangano ese ezvitendero. Mubvunzo wekutanga, "Hazvina kunaka here kushandisa pfungwa pane kushandisa muviri kurapa chirwere chepanyama?" Unopindurwa chaiko "hongu." Zvinonzi "pane zviitiko apo munhu anoruramisa mukushandisa simba rekufunga kukurira kurwara kwemuviri , mune iyo nyaya isu taizotaura kuti yakanga isiriyo yakaipa. Muzviitiko zvakawanda izvi zvakasarudzika zvisizvo kushandisa pfungwa pachinzvimbo chekurapa maitiro ekurapa chirwere chemuviri. "
Kana nekushandisa kwepfungwa zvinoreva kuti munyori anoreva kushanda kweimwe pfungwa yemunhu pane imwe pfungwa yemunhu, kubvisa zvakaipa panyama, ipapo ndinobvumirana naye kuti zvakaipa pane zvese zvinoitika. MaChristian Scientists haashandise pfungwa dzemunhu chero zvodini kuti abvise zvakaipa mumuviri. Ikoko kune musiyano uripo pakati peChristian Science nesainzi yepfungwa, iyo inopfuurwa ne "Shamwari."
MaChristian Scientists anoshandisa nzira dzomweya, kuburikidza nemunyengetero chete, kuporesa chirwere. MuApostora James vakati, "Munamato wekutenda uchaponesa vanorwara." Christian Science inodzidzisa nzira yekuita "munamato wekutenda," uye, sezvo vanorwara vachipora kuburikidza nemunamato weChristian Science, iwo humbowo hwekuti “ndiwo munamato. yekutenda. "" Shamwari "yakavhiringidza kusaziva kwechiKristu Kurapa kwechiKristu uye kurapwa kwepfungwa. Christian Science inotsamira zvakakwana kuna Mwari, kuburikidza nemunamato, nepo zvichinzi sainzi yepfungwa, kunyangwe ichishanda kuburikidza nekufunga kwepfungwa, kunyepedzera, kana mesmerism, ndiko kushanda kwepfungwa dzemunhu pane imwe pfungwa yemunhu. Mhedzisiro yenyaya yekupedzisira ndeyechinyakare uye inokuvadza, uye yakakodzera zvakakwana kutongerwa kwakaiswa pane maitiro akadaro ne "Shamwari." Zvisinei, hapana munhu, anogona kuramba kunyengetera kuna Mwari, uye hapana munhu angati kunyengetera nemwoyo wose kune mumwe kunogona kumboitika. kukuvadza.
Mumwe mubvunzo ndewekuti, "Ko Jesu nevazhinji vevatsvene havana kurapa hutano nenzira dzepfungwa, uye kana zvirizvo, zvaive zvisizvo?"
Mukupindura uyu mubvunzo "Shamwari" inobvuma kuti vakaporesa varwere, uye kuti zvaive zvisina mhosva kuti vadaro. Anoti, zvisinei, "Jesu nevatsvene havana kugamuchira mari yekurapa," uyezve anoti, "Zvakasiyana sei naJesu uye zvisingaite hazvo kuti kuna Jesu kana vadzidzi vake kana chero wevatsvene angabhadhara zvakadaro pakushanya murwere wese, anorapa kana haana kurapwa. "
Chokwadi ndechekuti Jesu akaporesa varwere, uye akadzidzisa vadzidzi vake maitiro. Vadzidzi ava vakadzidzisa vamwe, uye kwemakore mazana matatu simba rekuporesa raiwanzoitwa nekereke yeChristu. Jesu paakatanga kutumira boka revadzidzi vake nekurayira kuti vaparidze evharo uye nekuporesa varwere, akavarayira kuti varege kugamuchira mubhadharo. Paakavatumira nguva inotevera, zvisinei, akavaudza kuti vatore mikwende yavo, ndokuzivisa kuti "mushandi akafanirwa nomubhadharo wake." Rugwaro urwu rwakagamuchirwa kweanoda kusvika zviuru zviviri zvemakore sechiremera chakaringanira vafundisi uye vamwe vakaita basa rechikristu kuti vagamuchire muripo webasa ravo, uye panogona kunge pasina chikonzero chekuti vasarudze mamiriro eChristian Scientists. Vafundisi vanoshandirwa nemakereke kuti vaparidze uye vanamate, uye mune zvese zviitiko vanobhadharwa mari yakatarwa. VaChristian Science varapi vese vanoparidza vhangeri uye vanamate, asi havapihwe mubairo wakamira. Mhosva yavo ishoma zvekuti ive shoma, uye inobhadharwa nokuzvidira nemunhu iyeye anotsvaga rubatsiro. Iko hakuna kumanikidzwa pamusoro pazvo, uye mune chero chiitiko chinhu chemunhu oga pakati pemurwere neanachiremba nevekunze vasina hanya nazvo. Kuti uve muChristian Science murapi, munhu anofanira kusiya bhizinesi renyika uye ape nguva yake yese kubasa. Kuti vaite izvi, vanofanira kunge vaine imwe nzira yezvinhu zvakajairika. Kana pasina gadziriro yakaitwa yemubhadharo zviri pachena kuti varombo vaisazobviswa zvachose pabasa iri. Mubvunzo uyu wakagadziriswa nekereke yeChristian Science pane hwakafanira uye hunogutsa kumapati ivo pachavo. Iko hakuna kunyunyuta kubva kune avo vanotendeukira kuChristian Science kuti vabatsirwe. Kunyunyuta kwakadaro kunowanzobva kune avo vasina chekuita neChristian Science. Chero zvazvingaitika, inofanira kubvumwa nevose vanoshuva kubata nyaya iyi zvakanaka, kuti kana kuri iko kuripa vafundisi kuti vaparidze, uye nekunamatira kupora kwevanorwara, zvakaringana kubhadhara muChristian Scientist masevhisi.
(Saina) VO STRICKLER.
Mubvunzi anoti "takatora dzimwe nzvimbo dzisina kufanira paChristian Science, iyo, kana ikafungidzirwa zvine musoro, haina kufanira machechi ese echitendero."
Kuti zvivakwa zvacho hazvina kufanira musayenzi wechiKristu ichokwadi, asi hatione kuti kubva pamhedziso yavo inonzwisisika nzvimbo idzi dzingave dzisingafarire maitiro ezvechitendero ese. Sainzi yechiKristu inotaura kuti dzidziso dzayo dzakasiyana pakati pezvitendero zvazvino, uye hapana mubvunzo kuti ichokwadi. Nekuti izvo nzvimbo hazvibvumirane nesainzi yechiKristu, hazvizombotevedzera kuti nzvimbo imwechete iyi inoshanda kune ese masangano ezvitendero; asi kana masangano ese ezvitendero airamba chokwadi uye achidzidzisa nhema, saka isu tingave tisina hanya navo munzvimbo yedu kune dzidziso nedzidziso, apo chiitiko chinoda kuti maonero edu ataurwe.
Vachitaura kumubvunzo wekutanga nemhinduro ipapo, iyo yakaonekwa munaKUKUMA SHOKO, 1907, munyori wetsamba iri pamusoro anoti mundima yechipiri anobvumirana nesu kuti "kushanda kwepfungwa dzemunhu pane imwe pfungwa yemunhu, kubvisa munyama kurwara, kwakaipa muzvinhu zvese. ”
Pakuverenga izvi, mubvunzo unosimuka, ko chii chiri kudiwa kwekupokana kana nharo; asi tinoshamiswa nekutaura kunotevera: "Masayendisiti echiKristu haashandise pfungwa dzemunhu kuti abvise zvakaipa mumuviri."
Kana chiri chokwadi kuti pfungwa dzemunhu hadzishandiswe nasainzi wechiKristu mukuedza kwake nemabasa ake kubvisa zvakaipa munyama, ipapo nyaya yacho inobviswa kubva kumatare epasi, uye haisi ipapo kune chero dare rekubvunzira. Naizvozvo muKristu musayendisiti haafanire kuve nehanya nechero chii chirevo chisina kunaka pamaitiro ake, uye zviri kunze kwenzvimbo dzeMAMWEYA NESHAMWARI kuyedza kubata nechidzidzo chisinei nezvepfungwa dzemunhu. Asi hazviite sezviri pachena kuti chirevo chakadaro chinogona kuitwa nekutaura chokwadi. Kana zvichinzi ndidzo pfungwa dzamwari (kana chero imwe mhando yepfungwa) iyo inobvisa zvakaipa panyama, uye kwete pfungwa dzemunhu, saka sei kunze kwepfungwa dzemunhu pfungwa dzedenga dzingaite sei? Kana pfungwa dzedenga, kana chero nheyo inonzi ne "saenzi" ikaita, ikaita sei pasina zano kana basa repfungwa dzemunhu? Asi pfungwa dzoumwari dzinofanira kuita uye kubvisa zvakaipa panyama pasina basa kana kushandisa pfungwa yemunhu, saka nei kuri kuti kupindira kwechienzi musayendisiti kwakakosha kubvisa hutachiona hwemuviri chero hwerudzi? Kune rimwe divi, iyo nzira yakasarudzika ndeyekuti hapana chero huMwari kana pfungwa dzemunhu dzakashanda mukubviswa kwehurwere hwenyama. Kana zvirizvo, isu vanhu venyama, tisina kushandisa pfungwa yemunhu, kuziva kana fenzi iyo yakaipa yemuviri, kana pfungwa dzedenga, kana pfungwa yemunhu, tiripo. Iye munyori wetsamba anopedzisa ndima yechipiri achiti: "Pane musiyano uripo pakati peChristian Science nesainzi yepfungwa, iyo inopfupikiswa ne 'Shamwari.' ''
Isu tinobvuma kuti isu hatina kuziva mutsauko uyu pakati peSainzi sainzi nesainzi yepfungwa. Kusiyanisa kwakaitwa nesainzi wechiKristu kuri kufarira musayendisiti wepfungwa, mukuti, sekutaura kuri mutsamba iyi, musayendisiti wepfungwa achiri kushandisa pfungwa dzemunhu, nepo musayendisiti wechiKristu haadaro.
Mukutanga kwendima yechitatu munyori wetsamba iyi anoti: "Masayendisiti echiKristu anoshandisa nzira dzomweya kuburikidza nemunyengetero chete kuporesa chirwere." Mupostora Jakobo akati, "Munamato wekutenda uchaponesa vanorwara." ''
Aya mazwi anovhiringidza panzvimbo pekujekesa nhaurwa dzambotaurwa. Mubvunzo unomuka, ndechipi musiyano uyo Munyori anofunga kupa pakati pemweya nzira uye pfungwa? Kune psychic, mesmerist, uye amateur psychologist, zvese zviito zvisingatendi kuti zvinokonzerwa nechikonzero chemuviri zvinovhenekwa pasi peumwe musoro uye zvinodaidzwa kuti psychic, pfungwa, kana zvemweya; zvirinani zvemweya. Hazvizivikanwe kuti Munyori anofunga kushandisa sei chirevo chake "nzira dzekunamata," kunze kwekunge akabata kuti munamato hausi kushanda kwepfungwa. Asi kana munamato usiri wepfungwa yekuita, kana usina chekuita nepfungwa dzemunhu, ko munamato chii? Ndiani anonyengetera? Anonyengetera nezvei, uye anonyengetera kuna ani, uye chii?
Kana iye anonamata ari muKristu musayendisiti, anogona sei kutanga munamato wake pasina pfungwa dzemunhu? Asi kana asisiri munhu uye ave Divine, saka haafanire kunamata. Kana munhu achinamata, tinozvitora kuti munamato wake unonongedzwa kune simba rakakwirira kupfuura rake, saka munyengetero. Uye kana ari munhu anofanira kushandisa pfungwa dzake kuti vanamate. Iye anonamata anofanira kunyengetera nezvechimwe chinhu. Kufunga kunoitwa, kuti anonyengetera nezvezvirwere zvemuviri, uye kuti izvi zvikonzero zvinobviswa. Kana kuunzwa kwemunamato kuri kwekubvisa kwehurwere hwomuviri, munhu anonamata anofanira kushandisa humwe nhunhu hwake kuti azive nezvechirwere chepanyama uye kukumbira kubviswa kwacho kuti ibatsire murwere wemunhu. Munamato ndiye meseji kana chikumbiro chakanangana nemunhu, simba kana musimboti uyo ndewokubvisa urwere hwenyama. Zvinonzi munamato unonongedzwa kuna Mwari; asi uyo anoda kunyatso gonesa meseji kana kukumbira kune akaderera, akaenzana, kana mukuru, anofanira kuziva maitiro ekutumira meseji yakadaro kana kukumbira nenzira nenzira iyo inowana mhedzisiro yaunoda. Ani naani anonyengetera kana kukumbira aisazokumbira simba rakaderera kwaari, zvaari zvaisakwanisa kupa chikumbiro chake, uye aisazobvunza kune mumwe zvake akaenzana kuti aite izvo iye pachake aigona kuita. Zvine musoro, saka, kufunga kuti uya waanodakarira ari mukuru. Kana ari mukuru pasimba uye anehungwaru mukuita, ipapo chikumbiro chinofanirwa kunge chiri chekuita kuti chiitwe kune icho chisingazivikanwe kwechinhu icho iye chaasingazive. Kana asingazvizive, haasi-hungwaru-hwese; asi kana achizviziva, chiitiko chekunyomba uye kusakendenga kune wechikumbiro kukumbira munhu anehungwaru uye nehungwaru simba rese kuita chiito, nekuda kwekuti chikumbiro chinoratidza kuti ungwaru-hungwaru chero hungangoregwa. kuti aite icho chaaifanira kunge akaita, kana kuti haana kuziva kuti chinofanira kuitwa. Kana achibvumira, kune rumwe rutivi, kuti njere dzakangwara-zvese uye zvine simba rese, asi asina kunetseka nenyaya dzevanhu, ipapo iye anonamatira kana kunyengeterera kuti abvise chirwere chepanyama anofanirwa kuziva nezve izvo zvakaipa zvemuviri, uye anoshandisa pfungwa yake yemunhu mune imwe nzira yekutanga kuzivisa zvakaipa panyama kuburikidza nemunamato kuna Mwari, iko kungwara. Iko kukumbira kunofanirwa kuve kwekubvisa kwehurwere, uye saka mune chero mamiriro ezvinhu pfungwa dzinoshandiswa kune mitezo yemuviri. Kutanga ndekwomuviri, maitiro acho anofanira kunge ari epfungwa (chero chipi chingangotevera); asi mugumo ndewemuviri.
Kana riri iro remunamato wekutenda mubvunzo unomuka: chii chinonzi kutenda? Munhu wese ane chimiro chomunhu ane kutenda, asi kutenda kweumwe hakuzi kweumwe. Kutenda kwean'anga mumhedzisiro inobudirira yemiitiro yake kwakasiyana nekutenda kwemusayenzi wechiKristu angabudirira mune zvaanoita, uye zvese izvi zvakasiyana nekutenda kwaNewton, Keppler, Plato, kana Kristu. Anodakadza uyo anotenda kusingaoni kuna mwari wake wemapuranga anowana mhedzisiro sezvinoitwa chero mune akataurwa pamusoro aneiwo kutenda. Icho chinonzi chiitiko chakabudirira chingave chiri kubva mukutenda kusingaoni, pakufungidzira kwekuvimba, kana paruzivo chairwo. Mhedzisiro yacho ichaenderana nekutenda. Nheyo yekutenda yakafanana mune imwe neimwe, asi kutenda kunosiyana pamwero wehungwaru. Naizvozvo, kana masayendisiti echiKristu akataura kuti anoporesa kuburikidza nemunamato wekutenda, saka kurapwa kunoitwa kunofanirwa kuve kuri maererano nehukuru hwekutenda mukushandiswa kwayo kwenjere. Zvinogona kunge zviri infernal kana Divine; asi zvakadaro, nekuti mupositora James akati "munyengetero wekutenda uchaponesa vanorwara," hazviite kuti zvadaro. Chokwadi ndicho zvapupu uye kwete Apostle James.
Munyori anoenderera mberi achiti: "'Shamwari' yakavhiringidza kurapwa kweChristian Science nekuziva kurapwa kwepfungwa."
Kana zvirizvo, "Shamwari" inobvuma chikanganiso chake; asi haaone kuti masayendisiti echiKristu anogona kudzidza kugadzira, uye “kuita 'munamato wekutenda,”' vasingashandisi pfungwa dzevanhu. Kusava nechokwadi ichi kunoratidzika kunge kuchitsigirwa neinotevera chirevo: "Christian Science inotsamira zvakakwana kuna Mwari kuburikidza nemunamato, nepo zvinonzi sainzi yepfungwa, ingave ichishanda kuburikidza nekufunga kwepfungwa, kufungidzira kana mesmerism, ndiko kushanda kwepfungwa dzemunhu pane imwe pfungwa yemunhu." . Mhedzisiro yenyaya yekupedzisira ndeyechinyakare uye inokuvadza, uye yakakodzera zvakakwana kutongerwa kunoiswa pane maitiro akadaro ne 'Shamwari.' ''
Kunyange isu tisingatauri pano sekureva kwevasayendisiti vepfungwa uye totaura kuti zvataurwa pamusoro apa ndizvo chaizvo, vachiri mumabhuku avo masayendisiti epfungwa vanozviti pamwe nevechiKristu masayendisiti kuti vavimbe zvizere kuna Mwari, kana chero neshoko ravangasarudze Mwari. Izvi hazvitaure pachena musiyano unotaurwa neMunyori, nekuda kwezvikonzero zvakatoenderera. Kurapa kunoitwa nemasayendisiti epfungwa kunonzi kunobudirira uye kwakawanda mukuyanana kwevanorapa sekurapa kwevasayendisiti vechiKristu. Chero zvingave zvinorehwa nemiridzo yekurapa inosanganisira, kurapwa kunoitwa nemhando mbiri dze "sainzi". Zvinotaurwa, zvemunyori wetsamba iri pamusoro yesainzi yeSainzi zvinotaurwa zvakanyanya, sekuremekedzwa kwake nekuzvidza kwake kwevasayendisiti vepfungwa iye waanotarira zvisingaite. Izvi zvinoonekwa nekushandiswa uye kusavapo kwemavara makuru mumazita "Christian Science" uye "sainzi yepfungwa." Mutsamba yese iyi mazwi anoti "Christian Science" kana "Masayendisiti" anowanikwa, nepo pakutaura nezvesainzi yepfungwa kana masayendisiti, misoro isinganyatso zivikanwa. Pakupera kwendima iri pamusoro tinoverenga kuti: "Zvisinei, hapana munhu angaramba kunyengetera kuna Mwari, uye hapana munhu angati kunyengetera nemwoyo wose kune mumwe kunogona kuzokuvadza."
“Shamwari” inotsigira chirevo ichi, asi chinofanira kuwedzera munamato uyu kuti mumwe, uve pachokwadi uye unobatsira, unofanirwa kunge usina udyire; munamato kunyangwe iri wekubatsira kwemumwe, kana paine mubairo kana kupihwa mari, haugone kuve wakasvibiswa uye unorega kusava noudyire, nekuti mhindu dzezvako dzinofanira kugamuchirwa kunze kwekubatsira kunobva kune iyo ruzivo rwekuita basa.
Mundima inotanga: "Chokwadi ndechekuti Jesu akaporesa varwere, uye akadzidzisa vadzidzi vake maitiro," Munyori wedu anoedza kuratidza chokwadi chezvinoitwa nesainzi yechiKristu mukutora mubhadharo, zvinotevera: "Pakutanga Jesu Akatuma boka revadzidzi vake nemurayiro wekuti vaparidze evharo uye nekuporesa varwere, akavarayira kuti varege kugamuchira mubhadharo webasa ravo. Paakavatumira nguva inotevera, zvisinei, akavaudza kuti vatore mikwende yavo, uye akataura kuti 'mushandi akafanirwa nomubhadharo wake.' ''
Kutaurwa kwekutanga muTestamente Itsva kunoshanda kune chirevo cheMunyoreri wedu kunowanikwa munaMateu, chits. x., vs. 7, 8, 9, 10: “Uye kana muchienda, paridzai, muchiti, Humambo hwekudenga hwaswedera. Poresai vanorwara, natsai vane maperembudzi, mutsai vakafa, budisai madhimoni. Makagamuchira pachena, ipai pachena. Musatendera ndarama, kana sirivheri, kana ndarira, muhomwe dzenyu; kana hombodo yerwendo, kana nguo mbiri, kana shangu, kana tsvimbo; nekuti mushandi wakafanira chikafu chake.
Hapana chatiri kuona pamusoro apa kuti chibvumire musayendisiti wechiKristu kuti aripe muripo. Muchokwadi kuti chirevo "wagamuchira zvakasununguka, ipa pachena," chinopokana nazvo.
Muna Mako, chits. vi., vs. 7-13, tinoona: "Zvino akashevedza vanegumi nevaviri, akatanga kuvatuma vaviri vaviri, akavapa simba pamusoro pemweya yetsvina. vakavaraira kuti varege kutora chinhu cherwendo kunze kwemudonzvo chete; hapana chikwama, kwete chingwa, kwete mari muchikwama. Asi pfekai shangu, uye musapfeka majasi maviri ……… .. Zvino vakabuda, vakaparidza kuti vatendeuke; Zvino vakabvisa madhimoni mazhinji, vakazodza nemafuta vazhinji vairwara, vachiporesa.
Izvo zviri pamusoro hazvipikisi mukutsigira maitiro emasayendisiti echiKristu, uye zvechokwadi maKristu masayendisiti haakwanise kutaura kuti anotevera chero mirairo iri pamusoro.
Rondedzero inotevera yatinowana muna Ruka, chits. ix., vs. 1-6: “Ipapo akadanira vadzidzi vake gumi nevaviri, akavapa simba nechikuriri pamusoro pemadhimoni ese, uye pakurapa matenda. Uye akavatuma kunoparidza Humambo hwaMwari uye nekuporesa varwere. Zvino akati kwavari: Musatakura chinhu cherwendo, kana mudonzvo, kana bhata, kana chingwa, kana mari; uye usave nehembe mbiri imwe neimwe. Uye imba ipi neipi yamunopinda mairi, garaimo, mugobvamo ……… .. Zvino ivo vakaenda, vakafamba nomumaguta vachiparidza evhangeri, vachiporesa kwese. ”Hakuna kutaurwa pamusoro apa pamusoro pemubhadharo, nemirairo yakafanana ine chekuita. kusavapo kwemubhadharo, pachena kwekupfeka, kunoonekwa. Izvo zviri pamusoro hazvitsigire Mutauri wedu mune zvaanotaura.
Kutaurwa kunotevera kuri munaRuka, chits. x., vs. 1-9, apo zvinonzi: "Shure kwezvinhu izvi, Ishe wakasarudza vamwe makumi manomwe, akavatumira vaviri vaviri pamberi pechiso chake muguta rimwe nerimwe nenzvimbo kwaaizouya iye ... ...... Takurai kwete chikwama, kana bhururu, kana shangu; musakwazisa munhu nenzira. Uye paimba ipi neipi yamunopinda, tangai mati, Rugare kuimba ino. Zvino kana mwanakomana werugare aripo, rugare rwako ruchazorora pamusoro pacho, kana zvisakadaro, zvichadzokera kwauri. Uye mumba imwe chete garai, muchidya nekumwa, izvo zvavanopa, nekuti mushandi wakafanirwa nemubairo wake. Usaende paimba neimba. Uye muguta ripi neripi ramunopinda uye vagokugamuchirai, idyai zvinhu zvakaiswa pamberi penyu. Uye poresa varwere varimo, uti kwavari, Humambo hwaMwari hwaswedera kwauri.
Izvi zviri pamusoro zvine makotesheni mutsamba "kuti mushandi akafanirwa nemubairo wake"; asi mubhadharo uyu zviri pachena kuti "kudya nekumwa zvinhu zvavanopa." Zvirokwazvo kubva mune ino reruzivo Munyori wedu haangatori mvumo yekugamuchira mubhadharo kunze kwekungodya nekumwa zvakapusa zvakapihwa mumba memurwere. Zvese mareferensi parizvino zvave kupokana nekuwanikwa kweimwe muripo kunze kwekudya nekugara izvo zvinopihwa murapi. Uye sezvakaratidzwa muma MOMENTS NEVENHAMA, masikirwo anogara achipa izvi kune anorapa chaiye.
Tinotendeukira kuchinyorwa chekupedzisira, Ruka. chits. xxii., vs. 35-37: "Iye akati kwavari," Pandakakutumai musina chikwama, nehombodo, neshangu, makushayiwa chinhu? Ivo ndokuti: Hapana. Ipapo akati kwavari, Asi ikozvino, une chikwama, ngaachitore, pamwe chete nechikwama: Uye uyo asina pfumo ngaatengese nguvo yake, atenge rimwe. Nekuti ndinoti kwamuri: Izvi zvakanyorwa zvichafanira kuzadziswa mandiri. Uye akaverengerwa pakati pevadariki, nekuti zvinhu zvine chekuita neni zvine mugumo.
Zvinorehwa mundima dzambotaurwa zvinoita sekunge Jesu anga asisiri pamwe nevadzidzi, uye kuti vaizofanira kurwa nenzira yavo; asi hapana zvachose chinoreva kuripirwa pakurapa kwechirwere. Asi izvo, iwo murayiridzo wekutora mikwende yavo nemunyorero wavo pamwe navo unoratidza zvakapesana nekubhadharwa. kuti vaizobhadhara yavo nzira. Mune chokwadi ichi, izvo zvinofambiswa neMunyori wedu seuchapupu mukutsigira kwezvakataurwa nemaitiro esainzi vechiKristu, zvinova zvinopesana navo. Munyori wedu Akakuvadza nyaya yake nezvaanoenderera mberi achizvimirira. Iwo mirairo iyo yakapihwa naJesu haiteverwe kana mumweya kana mutsamba. Masayendisiti echiKristu haasi maKristu mudzidziso mavo uye havasi vadzidzi vaJesu; ivo vadzidzi vaAmai Eddy, uye vanosimudzira nedzidziso dzake, uye havana kodzero yekufambisa dzidziso dzaJesu mungave sedzidziso dzaAmai Eddy kana mukutsigirwa kwezvavanotaura nezvavanoita.
Munyori anoenderera mberi achiti: "Rugwaro urwu rwakagamuchirwa kweanoda kusvika zviuru zviviri zvemakore, sechiremera chakaringanira vafundisi nevamwe vanoita basa rechikristu, kugamuchira mubairo webasa ravo, uye hapana chikonzero chakakwana chekubvumirana pane izvi veChristian Scientist. ”
Hazviratidzi sezvakanaka kuti masayendisiti echiKristu vatevedzere mamwe maitiro evafundisi vekereke yechiKristu, vobva vazvipembedza kuti vabvume muripo nekuti vafundisi vanozviita, uye panguva imwechete yekuregeredza zvachose chechi yeChristian dzidziso dzayo huru, uye kuyedza kupfuudza chiKristu neChristian Science. Kereke yeChristian inotarisa mamwe maitiro uye inodzidzisa dzimwe dzidziso, idzo dzinotsoropodzwa nemazana ezviuru zvevanhu vechiKristudhomu, uye nevatungamiriri vekereke yechiKristudhomu yesangano rega rega vanoita zvinopesana nedzidziso dzaJesu, kunyangwe vachibata dzidziso; asi izvi hazvina chekuita nezvakaipa, kana zvisiri izvo, kuti maChristu masayendisiti vagamuchire mari yekubvisa hurema panyama nenzira dzepfungwa, kana, kana mutsara uyu uchikosha, nenzira dzemweya, nekuti kana Mwari kana zvemweya zvinoreva, zvinokanganisa kurapa, saka kurapa ndekwaMwari, uye chipo chemweya, uye musayendisiti wesainzi haana kodzero yekugamuchira mari yemuviri apo asina kurapa kurapwa, uye ari kuwana mari pasi pekunyepedzera kwenhema.
Munyori anoenderera mberi achiti: “Vafundisi vanoshandirwa nemachechi kuti vaparidze uye vanamate, uye munenge zviitiko zvese vanobhadharwa muhoro wakatemwa. Vanachiremba veChristian Science vanose vanoparidza vhiki uye vanamate, asi havapihwe mihoro.
Izvi hazvina mubvunzo chokwadi, asi, varume vakanaka vebhizinesi, vanounganidza vanobhadhara nguva yavo uye basa. Achienderera mberi pamubvunzo wekubhadharwa, Munyori anoti: "Mari yaanobhadhara iri diki kwazvo kuti ive shoma, uye anobhadharwa nokuzvidira nemunhu anotsvaga rubatsiro."
Kuti raji yacho ishoma uye idiki uye inobhadharwa nokuzvidira ingangove yakafanana mupfungwa imwe chete iyoyo kuti murume angangosiya chikwama chake paanofunga kuti angave nani, kana kuti imwe pfungwa yakamonyororwa anozvipira kuita zvinhu zvake opa mari yake achipa munyengeri. Kutaura kuti masayendisiti echiKristu haana mubhadharo wakagadziriswa uye kuti zvaakapomerwa zvidiki zvekuti zviite zvidiki, hazvina musoro uye zvinofanirwa kufadza huchenjeri hwomverengi. Mari yevamwe vevaridzi uye nevaverengi muchechi yesainzi yeChristian "ishoma kwazvo kuti ive shoma" chete kana mukana wemubhadharo wesayenzi wechiKristu ukawanikwa.
Vachitaura nezve chirevo cheMunyoreri wedu kuti "mhosva yavo idiki kwazvo kuti ive diki," uye "Mubvunzo uyu wakagadziriswa neChristian Science Church pachinzvimbo chakakodzera uye chinogutsa kumapati ivo pachavo. "Hapana chichemo kubva kune avo vanoenda kuChristian Science kuti vabatsirwe."
Isu tinorondedzera zvinotevera kubva kune zvakawanda zviitiko zvatakaitirwa kuti tifunge nezvazvo. Injiniya njanji yemunharaunda yaive nerudo rwe ruoko rwerudyi izvo zvaityisidzira kumukanganisa pabasa. Rubatsiro rwakange rusinga tsvakwe kubva kuna varapi vazhinji. Zano revarapi vake raiteverwa chero pazvinobvira, uye vaaishanda navo vakatomupa nzira yekuti atore rwendo rwegungwa sekurayirwa. Asi izvi hazvina kuita chero betsero. Akazoedza wechiKristu musayendisiti uye akazorora. Izvi zvakamuita kuti abatanidze chinamato ichi uye akava mutendi anoshingairira, uye akaedza kushandura dzakadaro shamwari dzake sezvaaizomuteerera. Asi haana kurapwa. Rimwe zuva akabvunzwa, nei, kana iye akabatsirwa zvikuru, wake wechiKristu saenzi chiremba aisakwanisa kumurapa. Mhinduro yake yaive: "Ini handikwanisi kuti iye andirape." Paakabvunzwa tsananguro, akati zvakatora mari yese yaaigona kupeta pamwechete kuti abudiswe sezvaaive achiri, uye kuti aisakwanisa kuwana mari yakakwana pamwe chete kuti irapwe zvachose. Akaenderera mberi akatsanangura kuti sainzi wechiKristu haakwanise kupa zvakakwana zvenguva yake kuti aporese kurapwa pasina kana akaripirwa; kuti muKristu musayendisiti anofanira kurarama, uye sezvaairarama pakurarama kwake pamubhadharo waakagamuchira kurapwa kwake, aingogona kuporesa avo vaigona kubhadhara kurapwa. Uku kuvhota kwesainzi vechiKristu kwaiita sekufunga kuti zvaive zvakafanira kuti asarapwe kunze kwekunge aine mari yekubhadhara kurapwa kwake.
Vanoenderera mberi nezvenyaya yekugamuchira mari kubva kumurwere kuti ibatsirwe zvakapihwa, Munyori ano anoti: "Hapana zvekumanikidzwa nezvazvo, uye mune chero chiitiko inyaya yemurwere pakati peiye murwere neanorapa, izvo nevari kunze havane hanya nazvo."
Sezviri pachena, hapana kumanikidzwa pamusoro pekugamuchira mubhadharo kana kuripa. Uyu ndiwo mubvunzo unosiyirwa kuteedzera, asi Munyaradzi haakwanisi kurasa nyaya yechikamu chekupedzisira chemutsara. Kuti vekunze havana hanya nenyaya dzega pakati pemurume nemurume ichokwadi; asi izvi hazvishande kune tsika yesainzi yechiKristu. Sainzi yeChristian inoedza kuita kuti dzidziso dzayo dzizivikanwe, uye maitiro ayo haingori nyaya yekuda kuzvimiririra uye yakavanzika pakati pemurume nemurume. Miitiro yesainzi yechiKristu inyaya yeruzhinji. Ivo vanokanganisa zvinofarirwa nenharaunda, nyika, uye yenyika. Vanorova vanhu vazhinji; vanoramba chokwadi, vanofunga nhema, vanoshaya hunhu hwezvakanaka nezvakaipa, vanokanganisa hutsvene nekuvimbika kwepfungwa; ivo vanoti inoshanda yekunzwisisa uye kugona kweiye mutambi wekereke yavo, mukadzi akapindwa muropa nehukuru hwekuneta kwerudzi rwake; ivo vaigadzira uye nekudzikisa nyika yemweya kuti ive mushandiri wepanyika ino; kwavo kwakanakira kwekunamata kunoratidzika kuve, mune chinangwa chayo chikuru, kungori kurapa kwechirwere, uye hutano hwemuviri wenyama. Chechi yemusayendisiti isainzi yakavambwa uye yakavakirwa pakurapa kwezvirwere zvepanyama, neziso kune mamiriro emuviri. Icho chinamato chose chesaenzi chechiKristu chinotendeukira kubudirira kwenyika uye nevapenyu muhupenyu hwepanyama; kunyangwe ichizviti ndezvemweya mavambo, muchinangwa, uye mukuita. Kubudirira muhupenyu uye hutano hwemuviri wenyama wakanaka uye yakakodzera; asi izvo zvese izvo pamusoro payo chechi chechi chechiKristu zvakavakirwa, zvinotungamira kubva pakunamata kwenheyo yaKristu neyechokwadi Mwari. Nemasayendisiti echiKristu, kutonga kubva kune zvavanotaura, Mwari aripo kunyanya nechinangwa chekupindura minamato yavo. Kristu ariko asi semufananidzo unofanirwa kunongedzwa kuratidza kuti muKristu musayendisiti akafanira mune yake tsika, uye munzvimbo yaMwari kana Kristu uye nechitendero, Mai Eddy vari navo deified uye vakaiswa muhurongwa hwekubwinya uye vakatendeuka Izvo, ngazvive chinhu chakatemwa uye chisina kutendeka, kubva pazvisina shanduko kana shanduko.
Mitsara mitatu inotevera mutsamba yakapindurwa mukati
Mutsara unotevera, zvisinei, unopa chimwe chimiro chakasiyana, kunyange zvakadaro uchine chekuita nenyaya yekubhadharwa. "Mubvunzo uyu wakagadziriswa nekereke yeChristian Science pane zvakakodzera uye zvinogutsa kumapato ivo pachavo."
Zvakangodaro; asi izvi ndizvo chete zvinogona kutaurwa nevezvematongerwo enyika kana vanonzi vechitendero chechiitiko nezvemaitiro avo. Kunyangwe zvingaonekwa sezvakakodzera uye zvinogutsa kumasainzi echiKristu, hazvina kudaro kune veruzhinji sezvazvingaite kana vasungwa vevapoteri vanopenga vachibvumidzwa kuita izvo zvavanogona kunge vachifunga zvine mukurumbira uye zvakafanira .
Munyori wetsamba anoipedzisa achiti: "Chero zvazviri, chinofanira kubvumwa nevose vanoda kubata nyaya iyi zvakanaka, kuti kana kuri iko kuripa vafundisi kuparidza uye kunyengeterera kupora kwevanorwara, zviri pachena." zvakafanana kodzero yekubhadhara Christian Scientist kuti iite mabasa akadaro. "
Zvekare tinotarisisa nezve kusarongeka kwekuedza kukanda mhosva, kana paine mhosva pane, pamufundisi wekereke yeChristian, uye kureurura zviitwa zvesaenzi dzechiKristu nemaitiro evafundisi vechiKristu. Haisi tsika muchechi yechikristu kuti mufundisi agamuchire mubairo wokunamatira vanorwara. Iye, sekutaurwa kwazvinoitwa nemusayendisiti wechiKristu, anogashira muhomwe mari yekuparidzira evhangeri semushumiri wekereke, uye kwete seanoporesa. Asi mubvunzo unosanganisirwa hausi wekuti ndizvozvo here kana kuti zvakaipa kubhadhara vafundisi kuti vaparidze uye kunyengeterera kupora kwevanorwara, uye nokudaro kupembedza masayendisiti echiKristu sebasa rakafanana.
Kuedza kukanda kukakavara pamusoro pevafundisi vechiKristu kunonetesa nharo yesainzi yemaKristu. Mubvunzo ndouyu: Zvakanaka here kana kuti zvakaipa kutora mari nekuda kwechipo chemweya? Kana zvakaipa, saka kana mufundisi akazviita kana kuti kwete, hachisi chikonzero chekunyepedzera kwekunyepedzera kana kutaura kunotaurwa nevechiKristu masayendisiti.
Nezve hwaro hwesainzi yechiKristu, zvinoita sekunge kana zvese mukana wekuita mari kubva kwaari achidzidzisa dzidziso dzechiKristu zvechienzi kana kubva pakurapa, kana kuedza kurapa, kwehurwere hwenyama hwakabviswa. VaKristu vesaenzi mari vanogadzira vangatorega kukuremekedza icho, kana kushaya chekushandisa. Kana vari vatendi vesainzi yechiKristu, kana kurapa kwehurwere hwakaipedzwa, hwaro hwekutenda kwavo dzidziso dzeSainzi hwaizopedzwa, uye "mweya" wavo ungangonyangarika uine hwaro hwepanyama.